Sharing For All: စကားပြောစွမ်းရည်
သင့်ရဲ့ စကားပြောစွမ်းရည်တွေကို တိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်ပါသလား? သေချာတာပေါ့ ။
သင့်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး စွဲမြဲလာခဲ့တဲ့ စကားပြောဆိုမှု ပုံစံတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ နည်းနည်းလေးတော့ အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါဟာ သိပ်ကို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီစာကို လိုတာထက်ပိုပြီး ရှည်မသွားရလေအောင်- စကားပြောတဲ့အခါ ကျနော်တို့အများစု ပြုလုပ်တတ်ကြတဲ့ အမှားတစ်ချို့နဲ့ အဲဒါတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ နည်းလမ်းတစ်ချို့ကို ကြည့်ကြရအောင်။
အမေရိကန် စာရေးဆရာကြီး အားနက်စ် ဟဲမင်းဝေးက ပြောခဲ့ဖူးတယ် -
” ကျနော်ဟာ နားထောင်ရတာကို သဘောကျတယ်၊ ဂရုတစိုက် နားထောင်ခြင်းကြောင့် တခြားလူတွေဆီကနေ ကျနော်အများကြီး သင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ လူအများစုကတော့ ဘယ်တော့မှ နားမထောင်တတ်ကြဘူး “
လူအများစုနဲ့ မတူပါနဲ့။ သင်ပြောရမယ့်အလှည့်ကို ရောက်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မနေပါနဲ့။ သင့်ရဲ့စိတ်ကို ခဏကလေး အောင့်ထားလိုက်ပါ။ တခြားသူတွေ ဘာတွေပြောနေကြတယ်ဆိုတာ အမှန်တကယ်နားထောင်တတ်အောင် သင်ယူပါ။
သင် အမှန်တကယ် နားထောင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီစကားဝိုင်းမှာ နောက်ထပ် ဘာတွေဆက်ပြောရမယ်ဆိုတဲ့ စကားလမ်းကြောင်းလေးတွေကို သင် ရရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ “ဟုတ်တယ်” “မဟုတ်ဘူး” အဖြေတွေကိုသာရမယ့် မေးခွန်းမျိုးကိုတော့ ရှောင်ပါ။ အဲဒီမေးခွန်းတွေက သင့်ကို အကြောင်းအရာတွေ အများကြီး မပေးနိုင်လို့ပါပဲ။ ဆိုကြပါစို့ … စကားဝိုင်းထဲကမှာ တစ်ယောက်က သူ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ ငါးမျှားထွက်တဲ့အကြောင်း ပြောတယ်၊ ဒါဆို သင် ဒီလို မေးလို့ရတယ် -
ဘယ်နေရာမှာ ငါးမျှားထွက်တာလဲ ?
ငါးမျှားရတာကို ဘာကြောင့် သဘောကျသလဲ ?
ငါးမျှားထွက်ရတာအပြင် တခြားဘာတွေ ၀ါသနာပါသေးလဲ ?
ဒါဆိုရင် ဒီလူဟာ အဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောစရာစကားတွေ ပိုရသွားမယ်၊ သင့်အတွက်လည်း နောက်ထပ်ထပ်ပြောရမယ့် စကားတွေ ပိုပြီး ရလာပါတယ်။
အကယ်၍ သူက ဒီလိုပြောမယ် ” ကျနော်မသိဘူး “
ချက်ချင်း လက်မလျှော့ပါနဲ။ နည်းနည်းလေး တို့ကြည့်၊ ဆွကြည့်ပါ။ ထပ်ပြီး မေးပါ။ ဒါဆို သူတို့နည်းနည်လေး ထပ်စဉ်းစားတော့မယ်။ ပြီးတော့ သူတို့တွေက အဲဒီစကားဝိုင်းကို စဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာလည်း ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
၂။ မေးခွန်းတွေ အများကြီး မေးခြင်း
သင်ဟာ မေးခွန်းတွေချည်းပဲ အများကြီးမေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါဟာ အချင်းချင်းစကားပြောနေတာနဲ့မတူဘဲ စစ်ဆေးမေးမြန်းနေတာနဲ့ တူသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းတွေချည်းပဲ သင့်မှာ ပြောစရာသိပ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လည်း တူနေပါတယ်။
နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ မေးခွန်းတွေကို ရိုးရိုးစကားနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်ဖို့ပါပဲ။ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားကို ဆက်ရရင်- သင်ဟာ အဲဒီမေးခွန်းတွေကို မမေးဘဲနဲ့ ဒီလိုလည်း ပြောနိုင်ပါတယ် ..
ဟုတ်လား၊ တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အေးအေးလူလူ အပြင်ထွက်တာ တကယ်ကောင်းတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ဘီယာ ၆ ပုလင်းလောက်ဝယ်ပြီး ပန်းခြံထဲသွားတယ်၊ ပြီးတော့ လေထဲမှာ ပန်းကန်ပြားလေးတွေ ပစ်တဲ့ ကစားနည်းကို ဆော့ကြတယ်။
ဒါဆိုရင် စကားကို ဒီနေရာကနေ ဆက်လို့ရသွားပါပြီ။ သင်ဟာ ပန်းကန်ပြားပစ် ကစားနည်းအကြောင်းကို ဆက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သင်အကြိုက်ဆုံး ဘီယာအကြောင်းကို ဆက်ပြောနိုင်တာပါပဲ
သင်အခုမှ စတွေတဲ့ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် ပုံမှန်ပြောနေကျ အကြောင်းအရာတွေ ကုန်သွားတဲ့အခါ ဘာမှမပြောတော့ဘဲ တိတ်ဆိတ်သွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Leil Lowndes က ပြောဖူးတယ် – ” သတင်းစာမဖတ်ရသေးဘဲနဲ့ အိမ်အပြင်ကို မထွက်ပါနဲ့” – တဲ့။ သင့်မှာ ပြောစရာအကြောင်းအရာ မရှိတဲ့အခါ သင်ဟာ အခုလက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ သတင်းတွေအကြောင်းကို စ ပြောလို့ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အခုလက်ရှိ လူကြိုက်များနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သိထားတာလဲ ကောင်းပါတယ်။ ဥပမာ .. Lost ဇာတ်ကားရဲ့ နောက်ဆုံးအခန်းက ဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲ … ဆိုတာမျိုး။
သင့်မိတ်ဆွေအိမ်က ငါးကန်လေးကိုလည်း ချီးမွမ်းလို့ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူ့ရဲ့ Mp3 ထဲက သီချင်းတွေအကြောင်း ပြောလို့ရတယ်။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အရာတစ်ခုခုအကြောင်းကိုလည်း စပြီး ပြောနိုင်တာပါပဲ။
၄။ ပြောဟန်ဆိုဟန် အားနည်းခြင်း
စကားပြောတဲ့နေရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ – သင် ဘာပြောတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သင် ဘယ်လို ပြောတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါက အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီးကို ဖြစ်စေပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့ အသံနဲ့ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဘာသာစကား (body language ) ဟာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုရဲ့ အဓိကသော့ချက် ဖြစ်လို့ပါပဲ ။
စဉ်းစားရမယ့် အချက်တစ်ချို့ကတော့ -
အရှိန်လျှော့ပါ။ သင်ဟာ အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အခါ စကားပြောတာ ပိုပိုပြီး မြန်လာပါလိမ့်မယ်။ အရှိန်ကို လျှော့ချဖို့ ကြိုးစားပါ။ ဒါဟာ နားထောင်တဲ့သူတွေအတွက် ပိုပြီး လွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သင်ပြောလိုတဲ့အချက်အလက်တွေလည်း သူတို့ဆီကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကျယ်ကျယ်ပြောပါ။ သင့်ကို သူတို့တွေကြားရဖို့ လိုအပ်သလောက်ကျယ်ကျယ်ပြောရမှာကို မကြောက်ပါနဲ့။
ရှင်းလင်းစွာပြောပါ။ ဗလုံးဗထွေး မပြောပါနဲ့။
ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ပြောပါ။ သင်ဟာ အသံအနိမ့်အမြင့် မရှိဘဲ ပြောနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူကမှ နားထောင်ချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့အသံမှာ သင့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေ ရောင်ပြန်ဟပ်နေပါစေ။
၅။ စကားဝိုင်းကို အပိုင်စီးထားခြင်း
ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေကို ကျနော် မကြာခဏကြုံရဖူးတယ်။ စကားဝိုင်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းဟာ အဲဒီစကားဝိုင်းမှာ ပါဝင်ရပါမယ်၊ သူတို့အတွက် စကားပြောဖို့အချိန်ကိုလည်း ပေးရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က ပုံတိုပတ်စတစ်ပုဒ်ကို ပြောနေတဲ့အခါ ကြားဖြတ်မပြောပါနဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် သင်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ယောက်ယောက်က သူ့အမြင်ကို ပြောတဲ့အခါ လူတွေရဲ့အာရုံကို သင့်ဆီပြန်ရောက်လာအောင်ဆိုပြီး စကားကို ဖြတ်ပြောတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ပြောခြင်းနဲ့ နားထောင်ခြင်းကို ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ပါ။
၆။ ကိုယ့်ဘက်က အမြဲမှန်ခြင်း
ငြင်းခုန်တာမျိုး၊ ပြီးတော့ ပြောသမျှအကြောင်းအရာတိုင်းမှာ ကိုယ့်ဘက်ကပဲ အမြဲမှန်တယ်ဆိုတာမျိုးကို ရှောင်ပါ။ ဒါဟာ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောသမျှ အကြောင်းအရာတိုင်းမှာ သင် “နိုင်” လို့လည်း ဘယ်သူကမှ သင့်ကို အထင်ကြီးကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား – ထိုင်ခုံမှာ ပြန်မှီထိုင်လိုက်ပါ၊ သက်သောင့်သက်သာနေပါ။ ကောင်းတဲ့ခံစားချက်လေးတွေ ဆက်လက် သွားနေပါစေ။
၇။ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိအောင် ထူးခြားသော အကြောင်းအရာများကို ပြောခြင်း
အကယ်၍ သင်ဟာ ဧည့်ခံပွဲတစ်ခုမှာရောက်နေမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ရင်းနှီးဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် စကားပြောတဲ့အခါ တချို့အကြောင်းအရာတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အကြောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် အဆင်မပြေတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေအကြောင်း၊ သင့်ရဲ့ အလုပ်မကောင်းကြောင်း၊ သူဋ္ဌေးရဲ့ဆိုးပုံတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် သင်နဲ့ တခြားလူတစ်ယောက်တည်းသာ နားလည်မယ့် အကြောင်းအရာမျိုးတွေ ပြောခြင်းကို ရှောင်ပါ။ သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ငြင်းခုန်ရမယ့်အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုလည်း ရှောင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိမထားဘဲ သင့်ရဲ့ ကားအသစ်ကြီးအကြောင်း ၁၀ မိနစ်လောက် တတွတ်တွတ် ပြောတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ တခြားသူတွေက ပျင်းလာပြီဆိုရင် အဲဒီအကြောင်းအရာကို ရပ်လိုက်ဖို့ အသင့်ပြင်ထားပါ။
အကြောင်းအရာတစ်ခုကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ပြောဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ရိုးရှင်းစွာပြောခြင်းပါပဲ။ပြီးတော့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေအပေါ်မှာပဲ အာရုံစိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ သူဋ္ဌေးအကြောင်း ၊ သင့်အလုပ်အကြောင်း ညည်းညူပြောတာမျိုးနဲ့ စကားဝိုင်းကို မစတင်ပါနဲ့။ တခြားသူတွေက အဲဒီအကြောင်းအရာတွေကို နားမထောင်ချင်ကြဘူးလေ။ အဲဒီအစား – သင်နောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အပျော်ခရီးအကြောင်းပြောပါ၊ သင် အ၀တ်အစားဝယ်တုန်းက ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ရီစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုအကြောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်သစ်ကူးညအတွက် သင် ဘယ်လို စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် တခြား ပျော်စရာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးကို ပြောပါ။
ပွင့်လင်းပါ၊ သင်တွေးမိတာတွေကို ပြောပါ၊ သင်ခံစားရတာကို မျှဝေပါ။ တခြားတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို မျှဝေလာရင်လည်း ဖွင့်ပေးပါ၊ ပြီးတော့ သင့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပါ။ ခေါင်းညိတ်ခေါင်းခါနေတာမျိုးပဲ မလုပ်ပါနဲ့။ သူတို့ကလည်း သင့်ကို စကားဝိုင်းထဲမှာ ပါဝင်စေချင်ကြတယ်လေ။
ဘ၀ရဲ့ တခြား ကဏ္ဍတွေမှာလိုပဲ၊ သင်ဟာ တစ်ဘက်က စရွေ့လျားတာကို အမြဲတမ်းတော့ စောင့်မနေနိုင်ပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့အခါ၊ စကားဝိုင်းကို ကိုယ်က အရင် စဖွင့်ကိုပါ။
၁၀။ ပြောစရာ များများမရှိခြင်း
စကားပြောနေရင်းနဲ့ ပြောစရာမရှိတော့တာမျိုးကို ကြုံဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုးစားပါ။ တခြားသူတွေ ဘာတွေပြောနေကြတယ်ဆိုတာကို အမှန်တကယ် နားထောင်ပါ၊ စိတ်ဝင်စားပါ။ မေးခွန်းတွေမေးပါ။ ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပြောပါ။
သင့်ရဲ့ မျက်စိတွေကိုလည်း ဖွင့်ထားပါ။ သင့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာမှုစွမ်းရည်ကို အားကောင်းအောင်လုပ်ပါ။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရှာဖွေပါ။ ကမ္ဘာကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေအပေါ် သင့်အမြင်ကို ဖြန့်ကျက်ထားခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဗဟုသုတ ဘဏ်စာရင်းကို တိုးပွားအောင်လုပ်ပါ။ သတင်းဂျာနယ်တွေ ဖတ်ပါ။ လက်ရှိ လူကြိုက်များနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း သိပါစေ။
သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကား (body language) ကိုလည်း ပိုပြီးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါ။
ဒါပေမဲ့ အေးအေးဆေးဆေး လုပ်ပါ။ ဒါတွေအားလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာ လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီအချက်တွေထဲက သင့်ရဲ့ စကားပြောစွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ထင်တဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အချက်သုံးခုကို ရွေးပါ။ ပြီးရင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ရက်သတ္တပတ် ၃-၄ပတ်လောက် လေ့ကျင့်သွားပါ။ ဘာတွေ ပြောင်းလဲလာသလဲဆိုတာကိုလည်း မှတ်သားထားပါ။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သင် စကားပြောတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ အလေ့အကျင့်အသစ်တွေဟာ အလိုလို စတင် ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
Ref: Do You Make These 10 Mistakes inaConversation? by Henrik Edberg
Post Credit to Your Life Success Blog
by ယဉ်ကျေးသော လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ဆီသို့
Posted by Coralchitthu at 5:03 AM
တကယ်ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါ စကားပြောရာမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွေက် တကယ့်ကိုဆေးတခွက်ပါဘဲ။